radio himilo | Radio Himilo | Page 150
Home / Author Archives: radio himilo (page 150)
Dhageyso: Barnaamijka Howl iyo Himilo
radio himilo June 5, 2016	Idaacadda Himilo, Wararka Leave a comment 135 Views
Barnaamijka Howl iyo Himilo waa toddobaadle aad laba goor ka dhageysataan idaacadda Himilo. Waxaynu uga hadalnaa oo alaa diiradda aynu ku saarnaa mid kamid ah adeegyada bulshada loo hayo, inagoo hadba dhinac ka bidhaamina. Barnaamijkan toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan ...
radio himilo June 4, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 427 Views
Halyeygii miisaanka feerka culus Mohamed Ali ayaa ku geeriyooday Isbitaalka ARIZONA oo xanuun hayay awgii loo dhigay maallintii Khamiista. Wuxuu la xanuunsanayay halyeygu dhibaato neef mareenka ka heysatay oo sabab uu u ahaa xanuunka Parkinson oo la sheegay mar in ...
Dhageyso: Barnaamijka Shaqsiga Caalamka
radio himilo June 4, 2016	Idaacadda Himilo, Wararka Leave a comment 76 Views
Barnaamijka Shaqsiga Caalamka waa toddobaadle aad ka dhageysataan Idaacadda Himilo. Barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa marba mid kamid ah hogaamiyaasha magaca reebay oo soo maray dunida, waxay isugu jiraan kuwo horey u geeriyooday iyo kuwo nool balse ka tegay dhaxal ...
Dhageyso: Barnaamijka Tusmada Tiknoolojiyadda
radio himilo June 4, 2016	Idaacadda Himilo, Wararka Leave a comment 114 Views
Barnaamijka Tusmada Tiknolojiyadda waa toddobaadle aad ka dhageysataan Idaacadda Himilo. Waxaynu Barnaamijka ku soo qaadanaa xubno iyo qoddobo la xiriira tiknoolojiyadda iyo heerarka ay taagan tahay. Fardowsa Sh.Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaysa.
Arsenal oo 24saac kusoo gebagabeyneysa saxiixa Jamie Vardy
radio himilo June 4, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 64 Views
Jamie Vardy ayaa 24 saacadood kaddib noqon doona laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta Arsenal sida ay ku waramayaan wararka ka ag dhow kooxda Gunners oo Waqooyiga London ka dhisan. Arsenal ayaa wadahadal toos ah la furtay 29 jirkaan iyadoo ...
Dhageyso: Barnaamijka Madasha Haweenka
radio himilo June 3, 2016	Idaacadda Himilo, Madasha Haweenka, Wararka Leave a comment 510 Views
Barnaamijka Madasha Haweenka waa toddobaadle aad ka dhageysataan Idaacadda Himilo. Xubno muhiim ah ayaan barnaamijka ku soo qaadannaa, waxaana soo jeedineysa Hana Maxamed Maxamuud
radio himilo June 3, 2016	Idaacadda Himilo, Wararka Leave a comment 575 Views
radio himilo June 3, 2016	Aragtida Islamka, Idaacadda Himilo, Wararka Leave a comment 582 Views
radio himilo May 29, 2016	Features, Wararka Leave a comment 1,493 Views
radio himilo May 29, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 365 Views